ခန္ဓာကိုယ်သားရဲဟာ Off 55%! တစ်ဦးလီမိတက်အချိန်များအတွက်သာလျှင် $ 39.90 သာလျှင်
Home » Beachbody » ခန္ဓာကိုယ်သားရဲဟာ Off 55%! တစ်ဦးလီမိတက်အချိန်များအတွက်သာလျှင် $ 39.90 သာလျှင်
အဆိုပါခန္ဓာကိုယ်သားရဲလေ့ကျင့်ခန်းစနစ်ဟာ Off 55%!
သာကန့်သတ်အချိန်, သင် Beachbody ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သားရဲလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တွင် 55% ကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။ ဒီခန္ဓာကိုယ်သားရဲရောင်းချခြင်းနှင့်အတူ, သင်သာ $ 39.90 ပေါင်းရေကြောင်းနှင့်အပြည့်အဝ DVD ကိုယလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်အတွက်ကိုင်တွယ်ပေးဆောင်။ ခန္ဓာကိုယ်သားရဲပုံမှန်အား $ 89.95 အဘို့အပြေး
ခန္ဓာကိုယ်သားရဲကိုပထမဦးဆုံး All-လွှမ်းခြုံယလေ့ကျင့်ခန်း, စွမ်းဆောင်ရည်အစားအစာနှင့်ဖြည့်စွက်စနစ်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ 12 ဒီဗီဒီအပေါ်4Dynamic သတ်မှတ်မည်သင်တန်းလေ့ကျင့်ခန်းပါရှိသည်။
သငျသညျတတ်နိုင်သမျှအချိန်အဖြစ်နည်းနည်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ကြွက်သားခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ရန်အဘို့အဒါဟာဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ကန်စွာသုံးတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်သားရဲ 10 ရက်ပေါင်းသကဲ့သို့အနည်းငယ်သာအတွက်ပိန်ကြွက်သားများ 90 ပေါင်ထည့်သွင်းနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်သားရဲ Dynamic သတ်မှတ်မည်သင်တန်း၏အယူအဆအပေါ်အခြေခံသည်။
dynamic သတ်မှတ်မည်သင်တန်းကြွက်သားကုန်ခမ်းတော့မှာနှင့်ပိုပြီးကြွက်သားအမျှင် "စုဆောင်း" ၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူတင်းမာမှုအောက်ရှိကြွက်သားရဲ့အချိန်ကောင်းလာတာပါကြောင်းအစုံနှင့်ကိုယ်စားလှယ်များ၏တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ် sequence ကိုဖြစ်ပါတယ်။ dynamic သတ်မှတ်မည်သင်တန်းလည်းသင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အ testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးသည်။ testosterone ကြွက်သားထုထည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲတာဝန်ရှိသည်အဓိကဟော်မုန်းဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကပို testosterone ဟော်မုန်း, ပိုမိုမြန်ဆန်ကြောင့်ကြီးထွားပါလိမ့်မယ်။
ခန္ဓာကိုယ်သားရဲရောင်းချမှုကိုပိတ်ထားသည်ဤ 55% ပိုမိုအင်ဖိုအတွက်အောက်ကနဖူးစည်းစာတန်းကိုကလစ်နှိပ်ပါ
* ခန္ဓာကိုယ်သားရဲရောင်းရန်ဟာ Off ဒီ 55%3/7/ 16 12 ၏အဖြစ်သက်တမ်းရှိဖြစ်ပါသည်: 00 AM EST ။ ကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုညွှန်ပြ date / အချိန်အဖြစ်တိကျမှုဖြစ်ကြပြီးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဝယ်ယူသည့်အချိန်တွင် Beachbody ပေါ်တွင်ပြမဆိုစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုအချက်အလက်များခန္ဓာကိုယ်သားရဲလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်သင်၏ဝယ်ယူမှုလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။
မတ်လ 7, 2016 FitnessRebates Beachbody မှတ်ချက်မရှိ
Franklin, WI ဘယ်ချိန်မဆိုကြံခိုင်ရေး7နေ့အခမဲ့အားကစားရုံ Pass ကို
သငျသညျအမြိုးသားမြားရဲ့ Tank ထိပ်တန်းသာလျှင် $ 11.95 ချီလိုပါကငါနှင့်အတူ လာ.